10 Astaamaha ugu caansan ee la booqdo | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Astaamaha ugu caansan ee la booqdo
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareen safarka Ruushka, Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Wanaagsan ee dhismaha, hodan ku ah taariikhda, ee magaalooyinka ugu quruxda badan dunida oo dhan, ah 10 astaamaha ugu caansan ee lagu booqdo tareenka dushiisa liiska baaldi. Laga soo bilaabo Yurub ilaa Shiinaha, iyada oo loo marayo albaabka ugu caansan magaalada Berlin, iyo Magaalada Xaaraanta ah, halkan waxaa ku soo dhuumanaya astaamaha caanka ah ee kaa yaabin doona.
1. Dhismaha Eiffel Tower Paris
Runtii way adag tahay in la seego taariikhdan xiisaha leh, 300 mitir munaaraddii birta ahayd. Haddii aad ku dhex mushaaxeyso Le Marais, Marwadeena, ama Laatiinka Quarter, astaantan weyn ee Paris waa la arki doonaa waqti walba.
Sidaas, haddii aad u safreyso Paris markii ugu horreysay, waxaad runtii hubaal ahaan u booqan doontaa Eiffel Tower dharaartii iyo habeenki si aad u aragto Eiffel dhammaantood waa shidan yihiin. Sidaa darteed, waa inaad sifiican ugu diyaar garowdaa booqashadaada oo aad ogaataa in sida ugufiican ee aad ugu safri karto Tower-ka Eiffel ee magaalada Paris, ama meelkasta oo yurub ah.
Sida Loogu Gaaro Daarta Eiffel By Rail?
Waxa ugu fiican ee loo safro Eiffel Tower waa tareen. The gaadiidka dadweynaha nidaamka Paris waa mid aad wax ku ool ah oo raaxo leh. Ku safridda meelaha hoose iyo astaamaha waa mid aad u fudud, iyo Eiffel Tower bartamaha magaalada waxay ka dhigan tahay inuu si fiican ugu xiran yahay tareenka Faransiiska.
Champ de Mars / Tour Eiffel waa xarunta tareenka ugu dhow, iyo Eiffel Tower waa xaq 2 daqiiqado ka socda saldhigga. Si kastaba ha ahaatee, ka degida xarunta 'Trocadero' waxay ku siineysaa aragtiyo sixir badan oo ku saabsan munaaradda iyo Seine-ka. Waad u qaadi kartaa RER Line C ilaa Eiffel Tower daqiiqad kasta daqiiqad kasta, iyo tigidhada metro ee safarka keliya waa € 1.9.
2. Astaamaha Ugu Caansan Ee Lagu Booqdo Tareenka: Darbiga Weyn Ee Shiinaha
Taariikhda adduunka ugu weyn ee dad samee, gidaarkii weynaa ee Shiinaha ayaa la wareegay 2000 sano in la dhiso. Dhismihii ugu horreeyay ee darbigu wuxuu bilaabmay horraantii qarnigii 7aad, markii dambena darbiyo dheeri ah ayaa lagu daray si loo xoojiyo loona beddelo Gidaarka Weyn ee Shiinaha mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee maskaxda ka dhacaya ee adduunka..
Maaddaama Gidaarka Weyn ee Shiinaha uu aad u ballaaran yahay, waad ka bogan kartaa dad badan meelaha guud ahaan Shiinaha, oo qaadan kara ilaa 175 maalmo si buuxda looga gudbo. Si kastaba ha ahaatee, meesha ugu wanaagsan ee lagu amaani karo Gidaarka Weyn ee Shiinaha waa Beijing, xaafadaha magaalada Beijing, iyo magaalooyinka sida Badaling. Si aad u soo gabagabeyn, Darbiga Weyn ee cabbirka Shiinaha, ahmiyada taariikhiga ah, oo naqshad-adduun-ka-baxsan ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah 10 astaamaha ugu caansan ee lagu booqdo tareenka.
Sida Loogu Gaaro Darbiga Weyn Ee Shiinaha Magaalada Beijing?
Waa inaad ugu safartid Saldhigga Huoying tareenka dhulka hoostiisa mara ama aad qaadataa khadka Airport Express. Markaa ka soo qaado Tareenka Huangtudian Tareenka S2 ee taga Saldhigga Tareenka ee Badaling. Waxaad ku arki doontaa albaabka laga galo Darbiga Weyn 20-daqiiqo oo socod ah laga bilaabo xarunta tareenka.
3. Astaamaha Ugu Caansan Ee Lagu Booqdo Tareenka: The Sistine Chapel Vatican City
Michelangelo's frescos qurux badan waxay ahaayeen martiyaal yaab leh da '. The Sistine Chapel ee Vatican City waxaa fiican inaad soo booqato fiidnimada Jimcaha iyo habeenada xagaaga oo ay dadku ku yar yihiin. Farshaxanka ugu weyn adduunka waxaa laga heli karaa matxafyada Vatican-ka, umana baahnid inaad qabsato wakhti aad ku gasho.
The Sistine Chapel waxaa loogu magac daray kan lixaad, yaa dhisay qarnigii 15aad. Sayidka, Frescoes qurxinta saqafka sare ee Sistine Chapel waxay muujinayaan sheekooyinka buugga Bilowgii. Garaacis iyo midabbo midab leh, frescoes-ka si fiican ayaa loo xafiday, oo waxaad si fudud u qaadan kartaa maalin dhan adoo bogaya muuqaalada.
Sida Loogu Tago Rome Sistine Chapel?
Sistine Chaple wuxuu ku yaal Vatican City, bannaanka Rome. Sidaa darteed, haddii aad ka soo booqaneyso Milan, Florence ama meel kale oo loo socdo Yurub, waa inaad marka hore qaadataa a tareenka-xawaaraha sare Rooma. Markaasuu, tareenka ka qaado Roma Tiburtina ilaa Roma St. Saldhiga Pietro, iyo waa 14 daqiiqado u socda Sistine Chapel.
Laga soo bilaabo Budapest ama Vienna, Marnaba ma fududaan safarka Charles Bridge meel kasta oo Yurub ah. Taasi maahan wax lala yaabo, tixgelinta xaqiiqda ah in Charles Bridge ee Prague ay tahay mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee lagu booqdo tareenka. Buundada dhagaxa gothic, Sidaana, bartamaha meesha udhaxeysa Mala Strana iyo magaalada hore, waa dhawr ka mid ah sababaha ammaanta.
Intaas waxaa sii dheer, Charles Bridge waa mid ka mid ah buundooyinka ugu quruxda badan uguna faca weyn Yurub. Sidaa darteed, waxaad la kulmi doontaa boqolaal dalxiisayaal ah oo raadinaya kuwa ugu fiican Sawirka Instagram barta Buundada. Haa, wakhti kasta oo maalin iyo sannad ah, waxaad ku biiri doontaa martida badan ee ku sugan Prague si aad u bogaadiso mid ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka.
Sida Loo Gaadho Charles Bridge Tareenka?
safarka tareenka Yurub waa mid aad u raaxo badan oo dhakhso leh, markaa waxaad uga safri kartaa Charles Bridge mid ka mid ah dalalka deriska ah. Ka imanaya saldhigga weyn ee tareenka (Luuqada maxaliga ah: Saldhigga Dhexe), waxay ku saabsan tahay 13 daqiiqado by metro ilaa Charles Bridge. Waxaad sidoo kale halkaas ku imaan kartaa lug, waa a 25 daqiiqado u soco Charles Bridge oo ka timaad saldhigga tareenka, laakiin waa lagugula talinayaa haddii aad ka imaaneyso Dresden, Budapest, ama Zermatt.
5. Astaamaha Ugu Caansan Ee Lagu Booqdo Tareenka: St. Basil’s Cathedral Moscow
Mid ka mid ah kuwa ugu badan fagaarayaal cajiib ah dunida oo dhan, Barxadda Cas ee ku taal Moscow waxay hoy u tahay cathedral-ka ugu quruxda badan. St. Basil’s Cathedral waa yaab, la 6 cibaado, si qurux badan oo farshaxanimo leh loogu sawiray qaababka joomatari. Kaniisadda weyn ee quruxda badan waxay ku qurux badan tahay facade iyo gudaha, oo leh macbud kasta oo lagu sharraxay xardhmo iyo sawirro.
St. Basil's Cathedral waa mid ka mid ah astaamaha ugu sarreeya Moscow waxaana loo dhisay astaanta guusha ee guuldaradii Argagax ee Ivan, Khankii reer Kazan. Sayidka, tan 1561 waxay soo jiidanaysaa malaayiin dalxiisayaal ah sanad walba aragti ah 1 astaamaha ugu xiisaha badan ee Ruushka.
Sida Loo Helo St. Basil’s Cathedral?
Saint Basil's Cathedral waxay ku taal Barxada Cas is, waxaadna ka raaci kartaa tareenka dhulka hoostiisa mara saldhigga Leningradsky ilaa Okhotny Ryad. Haddii aad rabto inaad aragto tan ugu fiican Ruushka, ka dib tareen xawaare sare ku socda oo ka yimid St.. Petersburg waa habka ugu fiican ee lagu safro.
6. Qasriga Peterhof Ee Magaalada St. Petersburg
Ruushka Versailles waxaa dhisay Peter the Great oo ah wadankiisa. Adiga safarka Peterhof Palace, waxaad booqan doontaa Beerta Hoose, Beerta Sare, Badda Channel, iyo laba daarood oo yaryar – Monplaisir iyo Marli Palace. Peter kii weynaa ee booqday Versailles 1770s-kii wuxuuna xaqiiqsaday hal abuurkii faransiiska mid kamid ah astaamaha ugu caansan Ruushka maanta..
Daarta Tsar waxay caan ku tahay ilaha biyaha, Wabiyaasha waaweyn, taallooyin kitaabiga ah, iyo beero. Jarmalku wuxuu burburiyey qasrigan quruxda badan ee WWII laakiin si guul leh ayuu u dayactiray si uu u noqdo dhaxal ahaan dunida UNESCO site.
Sida Loo Gaadho Peterhof?
Qasriga Peterhof waa mid ka mid ah astaamaha ugu sareeya ee lagu booqdo St. Petersburg. Tareen ayaad ugu safri kartaa Peterhof Saldhiga Baltiskiy ilaa Noviy Peterhof Station.
7. Astaamaha Ugu Caansan Ee Lagu Booqdo Tareenka: Kolosiyam Rome
Colosseum waa mid ka mid ah toddobada yaabab ee dunida casriga ah, Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la booqdo Colosseum adigoo socdaal lagu hogaaminayo. Haddii kale, ah taariikhda hodanka ah oo dhan ee dhismahan weyn ayaa adiga lagu lumin doonaa. Boqoradii Flavian-ka waxay u dhiseen shaqadan heer sare ah amphitheater, iyadoo leh fikrad ah in dadka laga ilaaliyo roobka iyo dabaysha, maanka ku haya.
Maanta waad booqan kartaa dhammaan heerarka 'Colosseum', ama aad uga bogan karto maqaayadaha badan iyo makhaayadaha ku dhow. Intaa waxaa dheer, colosseum kii ugu weynaa ee abid la dhiso, waxaa loo isticmaalaa maanta a goobta riwaayadaha muusikada tooska ah. halkan, waxaad arki doontaa magacyada ugu waaweyn adduunka miyuusigga, sida Elton John.
Sida Loo Gaadho Colosseum?
Waxaad ka gaari kartaa Colosseum labada garoon diyaaradeed ee Rome, tareen. Waxaa jira tareeno tagaya mid kasta 15 daqiiqado taga saldhiga Tiburtina, ka dibna metro toos ah astaanta Talyaaniga. Sida iska cad, aad ayey u fududahay inaad ka tagto Colosseum xarunta taariikhiga ah ee Rome.
8. Astaamaha Ugu Caansan Ee Lagu Booqdo Tareenka: Daarta Westminster Ee Magaalada London
Sooyaalka ugu caansan ee England waa Westminster Palace iyo Big Ben Tower. Golayaasha Baarlamaanka. Victoria Tower iyo munaaradda adduunka ugu caansan, Big Ben, samee calaamadda ugu caansan England.
Dulmaraya Wabiga Thames, iyada oo soo jiidashada indhaha London agteeda ah, dejinta agagaarka Westminster Palace waa heer sare. Wixii aragtiyo muuqaal ah oo cajiib ah, booqo London Eye sanadka oo dhan, maxaa yeelay gelitaanka Westminster waxay suurta gal tahay kaliya Sabtiyada, inta lagu jiro Luulyo iyo Ogosto.
Sida Loogu Tago Aqalka Westminster Iyo Big Ben?
U qaad khadka tuubbada wareegga saldhigyada Westminster ama Trafalgar. Haddii aad ka imaaneyso xaafadaha London, meel kasta oo ka mid ah Ingiriiska ama Yurub, ka dib Tareenka Koonfur Galbeed wuxuu noqon doonaa sida ugu wanaagsan ee loo safro.
9. Magaalada Shiinaha ee Xaaraanta ah
In wadnaha Beijing, waxaad ka heli doontaa irridda qasriga boqortooyada adduunka ugu weyn. Ka weyn Peterhof, Louvre ah, Kremlin, iyo Vatican-ka, qasriga Magaalada Reebay ayaa 980 dhismayaasha qasriga si loo baaro. Si ka duwan astaamaha kale ee adduunka, midkani waa alwaax oo dhan. Iyadoo 25 Imbaraadoorradii Shiinaha ayaa waagii hore degenaa qasriga, Magaalada Xaaraanta ahi waa madxafka ugu weyn adduunka.
Calaamadda aan caadiga ahayn waxay si xaq ah ku kasbatay magaceeda xitaa maalmahan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in 40% qasriga weli waa ka mamnuuc booqdayaasha. Si kastaba ha ahaatee, wali waad ka arki kartaa dhismaha oo dhan buurta ku taal Jingshan Park. Magaalada Xaaraanta ah waxaa laga yaabaa inaysan ka mid ahayn qasriyadaha ugu quruxda badan uguna quruxda badan Yurub, laakiin waa tan ugu xiisaha badan.
Sideen Ku Gaadhaa Magaalada Xaraanta Ah?
Shanghai ilaa Beijing waxay ku saabsan tahay 5 saacadood tareen, laakiin Beijing, waxaad metro u qaadan kartaa Magaalada Xaaraanta ah.
10. Astaamaha Ugu Caansan Ee Lagu Booqdo Tareenka: Brandenburg Gate Berlin
Brandenburg Gate waa sooyaalka ugu muhiimsan ee Berlin, maadaama ay astaan ​​u tahay Daaha Birta oo mar la kala qaybiyey Berlin. Albaabka waxaa markii hore dhisay Boqorka Prussia Frederick William II, qarnigii 18aad. Sayidka, habka ugu wanaagsan ee lagu barto taariikhda ka dambeysa astaantaan, kooban iyo inta aad la kulmeysid socdaalka kale, waxaa ku socdaal socod socod ah.
Galabtii iyo maalmaha fasaxa ah, the Pariser Platz wuxuu u noqdaa masraxa fanaaniin badan oo maxalli ah iyo muusikiisteyaal. Waxa kale oo aad markhaati ka noqon kartaa dadka deegaanka oo baaskiil ku dhex maraya albaabka oo fadhiya, sheekaysanaya, sugaya falaadhaha cadceedda in laga arko albaabka.
Sideen Ku Gaadhayaa Albaabka Brandenburg?
Sida ugu haboon ee loogu safro Brandenburg Gate waa khadadka S-Bahn, nidaamka dhulka hoostiisa mara. Qaad khadka kasta oo taga saldhiga Brandenburger Tor.
Gabagabadii, goobta, ahmiyada taariikhiga ah, naqshadaha, iyo baaxadda inbadan oo ka mid ah astaamahan caanka ah waxay soo jiitaan malaayiin dalxiisayaal ah sanad kasta. Sidaad u taagan tahay ka hor astaan ​​kasta, in Europe, Russia, ama Shiinaha, waxaad si fudud ula yaabaysaa quruxda iyo abuurista bog kasta.
halkan at Save A tareenka, waanu ku faraxsanaan doonaa inaan kaa caawino qorsheynta mid ka mid ah kuwan 10 astaamaha ugu caansan adduunka ee tareenka.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 Meelaha Calaamadaha ugu Caansan ee Lagu Booqdo Tareenka" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de ama / iyo luuqado badan / fr.
FamousLandmarks Landmarks mostfamouslandmarksineurope tareen safarka travelbytrain